Ukuhambisa ii-DCP kulo lonke elaseMalaysia eneJet ye-Signiant-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcaster ye-NAB Show Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Ukuhanjiswa kokuqukethwe » Ukuhambisa ii-DCP kwiMalaysia ngeJet Signant
Ukuhambisa ii-DCP kwiMalaysia ngeJet Signant
Ngo-Avinash Suresh, uMlawuli kwiYusari Filem
Isantya sokwamkelwa kobugcisa bobugcisa obutsha siyahlukahluka kwihlabathi lonke, kwaye iMalaysia sele isekelwe ekupheleni kwembalo. Ngokomzekelo, bekungekho i-6 kwiminyaka edlulileyo ukuba isuka 35mm I-Digital Cinema ibambelele ngokupheleleyo. Ngethuba ludla ngokukhawuleza okokuqala, emva kokuba izibonelelo kunye nokuphuculwa komgangatho kubonakala ngokucacileyo, kwaye kwamukelwa ngokupheleleyo kwilizwe lonke.
Okwangoku, iMalaysia inendawo efanayo kunye nekhompyutheni yokunyusa iifayile. Kwaye, nangona kubonakala ngathi sisemva, kukho ngokwenene izibonelelo ezikhoyo kwisimo sethu. Emva kweminyaka emininzi kwimarike, iteknoloji yokuphuculwa kwefayile iye yakhula ngokuphawulekayo, kwaye ngoku ishishini libona isondo lesibini sokwamkelwa kunye nokunyuka kwezisombululo ze-SaaS zelizwe. Amazwe afana nelaseMalaysia kunye namashishini afana neYusari alungele ukunqumla phezu kokusasaza kokuqala, kwaye athabathe ingqungquthela yesibini yokwamukelwa.
I-Jet ye-Signiant yamandla Ukunyuka nguYusari
UYusari Filem wasungulwa kwi-1976 njengenkampani yokuqala yokubhala phantsi eMalaysia. Siqalise ishishini lethu 35mm Imibhalo engezantsi isebenzisa ukutshatyalaliswa okutshisayo kwaye ekugqibeleni ihambele kwi-digital worklow ukuze ixhase i-Digital Cinema Packages (DCPs). Emva kokuphucula iziseko zethu zesikhokelo kunye nomda wendlela yokuhamba ngokubanzi kunokwenzeka, ukunyuswa kokubandakanya ukukhawuleza kwefayile kukunyuka kwendalo kwaye ekugqibeleni safika Imveliso entsha yeSignisant kuthiwa yiJet.
I-Jet iyisisombululo se-SaaS esenza kube lula ukuzenzekelayo nokukhawulezisa ukuhanjiswa kwefayile ye-system-to-system. Kwakhona iquka indlela entsha yokuthutha izithuthi ezisebenzisa ukufundwa komatshini ukulungiselela ukwedluliselwa. I-Signiant inesinye isisombululo esibizwa ngokuthi iMeneja + Agents, esiye sasijikeleze ixesha elide kwaye sisetyenziselwa iinkampani ezinkulu zeMediya zehlabathi ukuba zizenzele ngokuzenzekelayo ukudluliselwa phakathi kweendawo zabo zehlabathi kunye namaqabane, kodwa kwakungeyona nto ifanelekileyo kwishishini lethu lesayizi. I-Jet inikezela ngokusetyenzwa ngokukhawuleza kwamashishini afanayo, kodwa yanyuka kwiimfuno kunye nebhajethi yeenkampani ezincinci.
Ukuqwalasela iJet kuye kwasenza sikwazi ukuqala inkonzo entsha ye-brand ebizwa ngokuthi 'Hambisa ngeYusari,' eya kuqhuba ukuhanjiswa kwethu kweeDiskithophu zeDiskithophu zeDiskhi (DCPs) kwiidemesi kulo lonke elaseMalaysia. Ukuchaza ukusetha, iseva ye-Yusari Move iya kufakwa kuma-cinema kwaye le seva iya kuxhunyezwa kwi-TMS yendawo. Emva kokuba i-DCP ilungele ukuhanjiswa, iya kuthunyelwa nge-broadband kuma-cinema ahlukeneyo usebenzisa iJet Signant. Emva kokudluliselwa, iseva yokuhambisa iyakwenza isheke kwiphakheji ukuqinisekisa ukuba akukho zimpembelelo. Esi sisisombululo asize senzeke ngaphandle kokukhawuleza kweJet ye-Signiant, ukuthembeka kunye nobuchwepheshe bezokhuseleko. Emva kweenyanga ezininzi ze-R & D kwaye sisebenzisana kakhulu kunye neqela kwi-Signiant, sakwazi ukuvelisa isisombululo esenziwe ngenjongo yokunikezelwa kwe-DCP.
I-Jet idibana nentlungu ye-DCP yokuthunyelwa
Ukuhanjiswa kwe-DCP kuyinkalo ebalulekileyo yoshishino lethu. Kwiminyaka emithandathu edlulileyo, siye sithumela ii-DCP kwiidemesi ngee-drive disk ezinzima. Ngokuqhelekileyo sisebenzisa iinkonzo zee-courier kulezi zibonelelo, kwaye ziza kunye nemicimbi efana nokulibaziseka, ukukhathazeka kwezokukhuseleko kunye nefuthe lokusingqongileyo.
Enye yemingeni emikhulu ekuhanjisweni kwe-DCPs kukuba akukho nto ingakhohliswa ngayo kwingqibelelo yedatha. I-DCP nganye iqulethe uluhlu lokuPakisha. Zonke iifayile ezakhiweyo ziyahlulwa (ixabiso le-hash yi-BAS64 encoding ye-SHA-1 checksum) kwaye i-hash yabo igcinwa kwiLuhlu lokuPakisha. Le fayili isetyenziswe ngexesha lokungena kwi-server ye-digital cinema ukuqinisekisa ukuba idatha yonakalisiwe okanye iphazamiseke ngandlela-thile. Ukuba nayiphi na iifayile azihambelani, iseva ye-cinema iyakwenqaba ukungenisa i-movie-ukusetyenziswa kwee-drive disk ze-DCP ukusabalalisa kubangela iingxaki zobuninzi beenkcukacha ngenxa yamacandelo amabi.
I-Jet Signiant idibanisa kuphela imingeni, ikwabonelela ngesisombululo esincinci, esilula kunye nesichumayo-kwaye, ngokuqinisekileyo, yinto eyahlukileyo kwihlabathi xa ifika ngokukhawuleza.
Okwangoku, sizama ukuhamba kunye no-Yasuri kunye nama-cinema amahlanu, kwaye uceba ukunyuka kwiindawo ze-100 ekupheleni konyaka. Nangona kunjalo, kwi-front front, kusekho umsebenzi omningi okwenzayo. Isivinini se-intanethi saseMalaysia (umlinganiselo weendleko) sihamba emva kwabanye abamelwane bethu. Ukusebenza ngeSigniant kusenza sikwazi ukucwangcisa iimeko zethu zeekhnoloji kwaye sisebenzise ngokugcwele umgca wokuhamba. Ukongezelela, njengoko i-intanethi yaseMalaysia ihamba ngokukhawuleza kwixesha elizayo, Jet Signiant kuya kusenza sizisebenzise amathuba amatsha, kwiphondo nakwihlabathi.
CES2017 Cobalt Encoder Digital Nirvana UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli IBC kuhlolwa kweendaba MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya Umxholo ophantsi i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC	2019-05-15
Previous: Umqhubi weBoom
next: I-Dejero Izisa inkxaso kwi-SMPTE ST 2110